ပေါ့ဘာရဲ့အပွောငျးအရှအေ့တှကျ ဂြူဗငျတပျဈကစားသမားတဈယောကျကို ပွနျလညျအလိုရှိနသေညျ့ ယူနိုကျတကျ။ – SoShwe
Home/Sport/ပေါ့ဘာရဲ့အပွောငျးအရှအေ့တှကျ ဂြူဗငျတပျဈကစားသမားတဈယောကျကို ပွနျလညျအလိုရှိနသေညျ့ ယူနိုကျတကျ။
ပေါ့ဘာရဲ့အပွောငျးအရှအေ့တှကျ ဂြူဗငျတပျဈကစားသမားတဈယောကျကို ပွနျလညျအလိုရှိနသေညျ့ ယူနိုကျတကျ။
So Shwe April 29, 2020	Sport Leaveacomment
ယူနိုကျတကျအသငျးသညျ ကှငျးလယျကစားသမားပေါ့ဘာကို ဂြူဗငျတပျဈအသငျးထံ လကျလှတျခဲ့ရပါက အပွောငျးအရှရေဲ့တဈစိတျတဈပိုငျးအဖွဈ ဂြူဗငျတပျဈကစားသမားတဈယောကျကို ပွနျလညျချေါယူနိုငျရနျ ဆန်ဒရှိပါတယျ။ ယူနိုကျတကျအသငျးသညျ ပေါ့ဘာကိုရောငျးခရြနျဆန်ဒမရှိဘဲ စာခြုပျသကျတမျးတိုးရနျ ကွိုးစားနပေမေယျ့ ကစားသမားကသာ အသငျးမှ အမှနျတကယျထှကျခှာလိုပါက ရောငျးခသြှားမညျဖွဈပွီး ပေါ့ဘာရဲ့အသငျးဟောငျး ဂြူဗငျတပျဈအသငျးက အဆိုပါကစားသမားကို ပွနျလညျချေါယူရနျဆန်ဒရှိနပေါတယျ။
ပေါ့ဘာသညျ ပွီးခဲ့သညျ့ (၂၀၁၆) ခုနှဈကမှ ကလပျစံခြိနျတငျပွောငျးရှကွေ့ေးဖွငျ့ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးမှ ယူနိုကျတကျအသငျးကို ပွနျလညျပွောငျးရှလေ့ာခဲ့သညျ့ ယူနိုကျတကျအကယျဒမီထှကျ ကစားသမားတဈဦးဖွဈပမေယျ့ အသငျး၌ပုံမှနျခွစှေမျးပွသရနျ ရုနျးကနျနရေပွီး ကှငျးပွငျပနထေိုငျမှုပုံစံမြားကွောငျ့လညျး ယူနိုကျတကျဂန်တဝငျကစားသမားမြားနဲ့ပရိသတျမြားရဲ့ဝဖေနျမှုကို မကွာခဏခံနရေသညျ့ ကစားသမားလညျး ဖွဈပါတယျ။
ပေါ့ဘာအတှကျယူနိုကျတကျအသငျးက အနညျးဆုံးပေါငျသနျး (၁၂၀) ရရှိရနျ ပဈမှတျထားနပွေီး ဂြူဗငျတပျဈအသငျးကမူ ပွောငျးရှကွေ့ေးပမာဏသကျသာစရေနျအတှကျ သူတို့ရဲ့ ကစားသမားတဈဦးဦးကို ပေါ့ဘာအတှကျအလိုကျပေးကမျးလှမျးရနျဆန်ဒရှိပါတယျ။ အီတလီသတငျးစာတဈစောငျရဲ့ဖျောပွခကျြအရ ယူနိုကျတကျအသငျးရဲ့အမှုဆောငျခြုပျ အကျဝုဒျဝကျနဲ့ နညျးပွဆိုးလျရှားတို့သညျ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးရဲ့ ကစားသမားမြားဖွဈသညျ့ အဲလကျဈဆနျဒရို၊ ပီယာနဈ၊ ရာဘီယူ၊ ဒေါကျဂလပျဈကျောစတာနဲ့ ရမျဆေးတို့အနကျတဈဦးကို ပွနျလညျချေါယူရနျ ဆန်ဒရှိနကွေောငျး သိရှိရပါတယျ။
ပေါ့ဘာကိုချေါယူရနျအတှကျ စပိနျလာလီဂါကလပျ ရီးရဲယျမကျဒရဈအသငျးကလညျး ကာလရှညျစိတျဝငျစားခဲ့ပွီး ဂြူဗငျတပျဈအသငျးအနဖွေငျ့ ပေါ့ဘာကိုသာ ချေါယူလိုပါက ရီးရဲယျမကျဒရဈအသငျးထကျ လကျဦးမှုရယူနိုငျရနျ လိုအပျပါတယျ။
ပေါ့ဘာရဲ့အပြောင်းအရွှေ့အတွက် ဂျူဗင်တပ်စ်ကစားသမားတစ်ယောက်ကို ပြန်လည်အလိုရှိနေသည့် ယူနိုက်တက်။
ယူနိုက်တက်အသင်းသည် ကွင်းလယ်ကစားသမားပေါ့ဘာကို ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းထံ လက်လွှတ်ခဲ့ရပါက အပြောင်းအရွှေ့ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ဂျူဗင်တပ်စ်ကစားသမားတစ်ယောက်ကို ပြန်လည်ခေါ်ယူနိုင်ရန် ဆန္ဒရှိပါတယ်။ ယူနိုက်တက်အသင်းသည် ပေါ့ဘာကိုရောင်းချရန်ဆန္ဒမရှိဘဲ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးရန် ကြိုးစားနေပေမယ့် ကစားသမားကသာ အသင်းမှ အမှန်တကယ်ထွက်ခွာလိုပါက ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပြီး ပေါ့ဘာရဲ့အသင်းဟောင်း ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းက အဆိုပါကစားသမားကို ပြန်လည်ခေါ်ယူရန်ဆန္ဒရှိနေပါတယ်။
ပေါ့ဘာသည် ပြီးခဲ့သည့် (၂၀၁၆) ခုနှစ်ကမှ ကလပ်စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေးဖြင့် ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းမှ ယူနိုက်တက်အသင်းကို ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သည့် ယူနိုက်တက်အကယ်ဒမီထွက် ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့် အသင်း၌ပုံမှန်ခြေစွမ်းပြသရန် ရုန်းကန်နေရပြီး ကွင်းပြင်ပနေထိုင်မှုပုံစံများကြောင့်လည်း ယူနိုက်တက်ဂန္တဝင်ကစားသမားများနဲ့ပရိသတ်များရဲ့ဝေဖန်မှုကို မကြာခဏခံနေရသည့် ကစားသမားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပေါ့ဘာအတွက်ယူနိုက်တက်အသင်းက အနည်းဆုံးပေါင်သန်း (၁၂၀) ရရှိရန် ပစ်မှတ်ထားနေပြီး ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းကမူ ပြောင်းရွှေ့ကြေးပမာဏသက်သာစေရန်အတွက် သူတို့ရဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးဦးကို ပေါ့ဘာအတွက်အလိုက်ပေးကမ်းလှမ်းရန်ဆန္ဒရှိပါတယ်။ အီတလီသတင်းစာတစ်စောင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့အမှုဆောင်ချုပ် အက်ဝုဒ်ဝက်နဲ့ နည်းပြဆိုးလ်ရှားတို့သည် ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းရဲ့ ကစားသမားများဖြစ်သည့် အဲလက်စ်ဆန်ဒရို၊ ပီယာနစ်၊ ရာဘီယူ၊ ဒေါက်ဂလပ်စ်ကော်စတာနဲ့ ရမ်ဆေးတို့အနက်တစ်ဦးကို ပြန်လည်ခေါ်ယူရန် ဆန္ဒရှိနေကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ပေါ့ဘာကိုခေါ်ယူရန်အတွက် စပိန်လာလီဂါကလပ် ရီးရဲယ်မက်ဒရစ်အသင်းကလည်း ကာလရှည်စိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီး ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းအနေဖြင့် ပေါ့ဘာကိုသာ ခေါ်ယူလိုပါက ရီးရဲယ်မက်ဒရစ်အသင်းထက် လက်ဦးမှုရယူနိုင်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။
Previous Demi Lovato ??? Selena Gomez ????????? ????????????????
Next ????????????????????????????????? ???????????????? ????????????????